शून्य लागतमा मलेसिया रोजगार, ओभरटाइमको सुविधा सहित यति तलब.. – Sandes Post
April 16, 2022 184
मलेसियाको एक कम्पनीको लागी फ्रि भिषा फ्रि टिकेटमा नेपालीलाई रोजगारीको सुवर्ण अवसर आएको छ ।
मलेसिया रोजगारको लागि अधिकाश कम्पनीको लागि निशुल्क नभएको अवस्थामा यो कम्पनीको लागि भने निशुल्क माग आएको छ ।
मासिक तलव रु ३४,५२० हुने बताइएको छ भने ओभर टाइमको पनि सुविधा रहेको समेत बताइएको छ । मलेसियाको us industry मा ६७ जना नेपाली कामदारको माग आएको छ भने सेवा सुबिधा समेत राम्रो रहेको छ ।
इच्छुक रोजगारीमा जान चाहनेले बिस्तृतमा मेनपावर कम्पनीमा सम्पर्क गर्नु होला ।
हेर्नुस् बिज्ञापन र मेनपावरको विवरण
S.V. Associates Pvt Ltd. 009771-4018688 License No: 256/058/59
त्यो अनुसन्धानबाट, त्यो वर्षको न्यूनतम ज्याला वृद्धिबाट करिब १८ लाख लाभान्वित भएका थिए। त्यतिबेला मलेसियामा करिब २० लाख विदेशी कामदार थिए । “हामीलाई लाग्छ कि त्यसबेला लाभ उठाउनेहरू मलेसियाली होइन विदेशी कामदार थिए। “यी विदेशी कामदारहरूले प्रत्येक वर्ष RM3.4 बिलियन आफ्नो देशमा फिर्ता पठाएका छन्। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि पैसा हाम्रो अर्थतन्त्र विकास गर्न प्रयोग भएको थियो।
यसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ, “उनले मलेसियामा नेशनल काउन्सिल अफ प्रोफेसरहरू (MPN) द्वारा आयोजित एक अन्तर्वार्तामा भने। युनिराजकका अर्थविद् प्रा इमेरिटस डा. बर्जोया बर्दाईले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि यसको थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बाढी, कोभिड–१९ सङ्क्रमणलगायतका विभिन्न घटनाले गत वर्ष उत्पादकत्व दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेकाले मूल्यवृद्धि स्थगित गर्नु राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
“स्थगन गर्नुहोस्, अहिले कार्यान्वयन नगर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्। हामीले आशा गरे जति परिवर्तन हुने छैन,’ उनले भने। यसैबीच, कार्यक्रमका प्यानललिस्टसमेत रहेका एमपीएनका अध्यक्ष प्रा दाताक डा रादुआन चे रोजले यो विषयलाई यथार्थपरक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । यद्यपि कतिपयले RM1,500 न्यूनतम पारिश्रमिक उच्च छ भनी सोचेका छन्, धेरै मानिसहरूले 2020 मा घोषणा गरेको RM1,200 न्यूनतम ज्याला अझै कम थियो भनेर बुझ्नुपर्छ।
“मलाई विश्वास छ कि राष्ट्रिय ज्याला परामर्श परिषद् (MPGN) ले महामारीको कारकलाई लिएको छ। ‘हरेक वर्ष वृद्धि नहुन सक्छ तर जीवनयापनको मूल्यलाई हेरेर दुई वर्षमा एकपटक परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसैबीच उनले कतिपय क्षेत्रका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने औचित्य हेरेर थप यथार्थपरक बन्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।
Prevयिनै हुन् काठमाडौंमा बेसिगाउँमा बसको ठ-क्करबाट मृत्यु हुने १८ वर्षीय दिपेन दाहाल, २ जना घाइते
Nextयस्तो रहेछ ७ महिना अघिको त्यो मिलापत्र, अमृता र परिवारबीच गरिएको रहेछ यस्तो सम्झौता, अमृता कहिल्यै….
२९ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?